Uyifaka njani i-ClockworkMod yokuBuyisa kwaye ube yingcambu kwi-Huawei u8650 | I-Androidsis
I-Huawei u8650 Sisiphelo esinexabiso eliphantsi, esineempawu ezinkulu zobuchwephesha, ethi ngokulandela imiyalelo embalwa encinci, sinako ingcambu kwaye ufake i-ClockworkMod Recovery, ukukhupha konke ukubanakho okufihliweyo.
Ukuqulunqa i-rooting kunye nokufaka ukubuyiswa okukhankanywe ngasentla, Sinako umzekelo faka iirom eziguqulweyo nezilungisiweyo ukufumana ukusebenza okungcono kule ndawo intle kangaka, ukongeza ekubeni ukwazi ukufaka usetyenziso olufanelekileyo kunye nelungelo lokusebenzisa ubuninzi, umzekelo ukusetyenziswa kwebhetri yethu.
1 Uxhasa isaphuli Huawei u8650
2 Ukufaka ukubuyiswa kweClockworkMod kwiHuawei u8650
Uxhasa isaphuli Huawei u8650
Ukucothula le terminal, siya kuyenza ngendlela elula kakhulu, kuya kufuneka sinyanzele khuphela olu hlaziyo.zip y ikope ngaphandle kokucinezela kwi ingcambu ye-sdcard yethu.
Nje ukuba ifayile ye-zip ikhutshelwe kwaye ikhutshelwe, siya qala yethu Huawei u8650 Kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, ukwenza oku ukuqala kwifowuni evaliwe ngokupheleleyo, siya kucofa ngaxeshanye kwaye ngaphandle kokukhulula amaqhosha ivolumu phezulu kunye neqhosha lamandla.
Kule menyu, siza kuhamba sisebenzisa amaqhosha evolumu, kwaye siya kuqinisekisa nge iqhosha lamandla.
Siza kuhla kukhetho olubiziweyo "Hlaziya i-sd", Siza kuqinisekisa ngeqhosha lamandla kwaye sikhangele ifayile ye uhlaziyo.zip ukukhutshelwa kwangaphambili, siya kuqinisekisa kwakhona ngeqhosha lamandla, kwaye xa ukufakela kugqityiwe, siya kusebenzisa ukhetho "Inkqubo yokuphinde ubhuthe ngoku" ukuqala kwakhona i-terminal.
Ngale nto siya kuba nayo isekelwe i-Huawei u8650Singayijonga ngokufaka i-Android yesicelo sedrowa kwaye siza kubona ukuba isicelo esitsha sibiziwe Superuser.
Ukufaka ukubuyiswa kweClockworkMod kwiHuawei u8650
Eyokuqala kuyo yonke iya kuba kukukhuphela abaqhubi abafanelekileyo ukuze ifayile ye- inkqubo edanyazayo Isixhobo siyasibona, nje ukuba kufakelwe abaqhubi abafanelekileyo, siya kuqala kwakhona Windows.
Ngoku kufuneka sikhuphele ukubuyiswa kweClockworkModNje ukuba ifayile ekhutshelweyo ikhutshelwe, siya kuyikhulula izzip naphi na, ngakumbi kwi-desktop yethu. Windows, kwaye siya kuyenza ifayile ebizwa IClockWorkMOD 5.0.2.7 (iBootloader-Volum PHANTSI + NAMANDLA).
Kweli nqanaba siza kucima ngokupheleleyo iselfowuni, Nditsho nokususa ibhetri kangangemizuzwana engama-30Emva koko siya kufaka ibhetri kwaye sivule ifayile ye Huawei Kwimo fastboot, oku kufezekiswa ngokubamba phantsi ngaxeshanye kwaye ngaphandle kokukhulula ivolumu phantsi kunye neqhosha lamandla, malunga nemizuzwana engama-25.
Ngoku siza kuba kuphela qhagamshela iselfowuni kwiPC nge-usb kwaye ulinde inkqubo ekhanyayo ukwenza umsebenzi wayo, wakube ugqibe, ifayile ye- IHuawei u8650 Iya kuqala kwakhona, kwaye siya kuyifaka ngokuchanekileyo ifayile ye- ClockworkMod RecoveryUkufikelela kolu hlaziyo lutsha, siya kuyenza ukusuka kwisiphelo sendlela sicinyiwe, siyivule ngokucinezela amaqhosha ngaxeshanye. amandla kunye nevolumu phezulu.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Iqela leRom Lightning: IHuawei U8650, I-DX Battery Booster, yenza ulawulo lwebhetri yakho
Khuphela - uhlaziyo.zip, Baqhubi, ClockworkMod Recovery
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Indlela ukuba neengcambu kwaye ufake ClokworkMod Recovery kwi Huawei u8650
Umbono uyaxatyiswa kodwa awunakwenziwa, ubuncinci kunye neYoigo firmware ...
Ubuncinci into yeNgcambu iya kube ikusebenzele, akunjalo?
Molo! Ndilandele nje isifundo kwaye xa ndisebenzisa i-ClockWorkMOD ayitshintshi isikrini ngalo lonke ixesha ndiyishiya isebenza. Ndikwazile ukuqaphela ukuba ibat ephunyeziweyo indinika i-OK, kodwa khange ndikwazi ukufunda ngakumbi. Isiphelo sihlala sitshixiwe kwaye sihlala sinjalo kude kube yilapho ndisusa ibhetri kwaye ndiyiyiqale ngokutsha. Emva koko isebenza ngesiqhelo. Isicelo se-superuser sibonakala kum. xa ndizama i-fastboot ilandela ilogo ye-YOIGO ngaphandle kokutshintsha nokuba ndiyibambe kangangemizuzwana engama-60 kwaye ukuyidibanisa ne-USB akwenzi nto
Uxolo. Kwenzekile kum ukuyilayita ikwimo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye ifakwe… ..okanye kubonakala njalo.
Cwangcisa imo yokubuyisela esekwe kwi-CWM v5.0.2.7
Ngoku unokwenza i-backup, eyinto yokuqala ekufuneka uyenzile.
Kodwa ewe sitsho
Ukusuka kolona lwazi lunzulu… ngaba le ngcaciso yohlobo lwe-2.3.6 ilungile ???
Andikwazi kungena kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, iselfowuni inokundinceda kwaye ndiyincothule ngenkqubo kodwa nokuba ndingangena ukubuyisela i-TT
iyayisebenzela huawei u8510?
Hayi, lolunye uhlobo lwesiphelo kwaye ke ngekhe ndizame
Nge-19/09/2012 ngo-23: 25, «Disqus» wabhala:
isithuba sezomthetho sitsho
I-huawei y100 yam ixhomeke kwiscreen esithi yenyuka kwaye emva koko uphawu lwe-huawei luyavela, ndenzeni? Sele ndizibonile iitutorials ezininzi kwaye inyani ayisiyonto ... ngalo lonke ixesha ndisenza into endifumana "impazamo yedatha yelog yokugqibela"
Mennn andazi ukuba ndenze njani kuba itsiba ukufaka isisu ndikhuphe nceda ndincede TT andazi ukuba ndenzeni ngoku ...
Mennn andazi ukuba ndenze njani kuba iyanditsiba ekufakweni okukhutshiweyo ndincede TT andazi ukuba ndenzeni ngoku ... Ndiyayidingaooo ayizukundivumela ndifake i-ClockworkMod Recovery enkosi kwangaphambili
Ungowaliphi ilizwe ngoba ngokwentetho yabo bathi i-3g izakujikeleza: / kukuthandabuza kwam okukhulu
Phendula kwi thanoo
A indibeka ndilinde ukuchacha kwaye ivale, ndisenayo ikhusi kunye nelogowei logo. Ndenze ntoni? Enkosi
Ndine-2.3.6 yenguqulo ye-android, kwaye andinakuyifumana isebenze, xa ndingena kwimowudi yokubuyisela kwakhona kwaye ndizama ukuqala kuhlaziyo.zip, ihlala isithi ufakelo lukhutshiwe, aluphumelelanga ukuqinisekisa utyikityo lwefayile yonke. Enkosi
Ngena kwi http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2698454 uye kwiziko apho ithi NGOKUTSHINTSHILEYO 2.3.6 yenza amanyathelo kwaye uye .. eli likweli phepha le-Android 2.3.3
Jbc 60 sitsho
UJavier kwenzeka into efanayo kum, ndizamile nge-7 nangombono, kodwa ekugqibeleni bekune-xp, ingxaki kukuba khange ibabone abaqhubi, ndibabekile ngokubanyanzela kunye Abaqhubi kwimizuzu emibini babeneengcambu kwaye babenendlela eyahlukileyo yokufumana kwakhona, khangela kwi-google ingcambu huawei u8650 taringa, uyarhuma kwaye uya kubona isifundo kunye namakhonkco kulula kakhulu, ngaphambi kokukhuphela abaqhubi be-huawuei kwi-htcmania. ilula
Phendula Jbc 60
Unokubeka amakhonkco emaqandeni
Kwaye uhlonipha igama lakho le-imeyile kwaye uye kwindawo enye, akunjalo?
Molo, ayindivumeli ndingene kwimowudi ye-fastbot, ndicofe amaqhosha malunga nemizuzwana engama-25 kwaye ifowuni ibanjiwe ivula
U-Eske uye wabanjwa kwaye ngalo mzuzu uqhuba (iBootloader-Volum DOWN + POWER). Kuthatha kuphela i-2sec kwaye sele uyiqala kwakhona iselfowuni ngoku
ikwandixelela ukufakelwa okukhutshiweyo
Molo, jonga, ndinayo huwei u8650, ndiyiqale ngokutsha kwaye ibhlokiwe, andinakho ukufikelela kuyo, ndiyayilayita kwaye kuphela kwintengiso yenkampani yoigo ebonakala. Ukuba ungandinceda kule ngxaki, ndiyabulela
Phendula kwi papo
Molo, ndikhuphele abaqhubi iiwindows xp kodwa andazi ukuba ndingazifaka njani, andinazo naziphi iifayile ze .exe… besele ndikwazile ukuyisusa kwangoko kodwa ngoku andikwazi ukufaka iwatchworkmod ukuze nditshintshe Iirom. Nceda undincede!!!
Oko kwenzekile nakum kwaye nditshintshe ukubuyisela kwakhona kwaye kwahlala kakuhle
UFelipe Romero sitsho
Umhlobo olungeleyo enkosi kakhulu undenzele i-AT & T Huawei U8652 ukubulisa
Phendula uFelipe Romero
Iyanceda nge-u8652-51 yam, ndiyingcambu kwaye xa ndiyitshintshile ifonti yaqala kwakhona, emva koko yamangaliswa kwaye ndasusa ibhetri, emva koko ndaphinda ndayiqala kwakhona kwaye ayisasebenzi, ndenza ntoni ?? ? ngokubhekisele
UCarlos Garibay sitsho
Isebenza kwi-hauwei u8510?
Phendula uCarlos Garibay
Nje ukuba ucofe kwiClockWorkMOD 5.0.2.7 (iBootloader-Volum DOWN + POWER). kwaye uqhagamshele iselfowuni kwiPC, kuthatha ixesha elingakanani ukuqala kwakhona?
Ithatha 4h. idityanisiwe kwaye isekhona ne logo yeYoigo kwaye kwikhompyuter ikhusi elincinci elimnyama elinomyalezo: «ukuthumela ukubuyisela kwakhona ... _ kunye nesikhombisi esidanyazayo. Ngaba kuyinto eqhelekileyo?
Ngaba le nkqubo iyasebenza ne-huawei u8667?
Ngaba uyazi ukuba kukho indlela yokukhulula le modeli nge & t ukuyisebenzisa kunye ne-telcel okanye i-movistar evela eMexico?
U-Luis Gerardo Torres Gomez sitsho
Ngaba le nkqubo iyasebenza kunye neHuawei U8651t?
Phendula uLuis Gerardo Torres Gomez
IZiyon iZion sitsho
Umhlobo ndifuna uncedo ndine-HUAWEY U9508 sele ndinayo ingcambu kwaye ndifake kwakhona ukuba ungandinceda ukufaka ikik kat
Molo, ndiyifundile le post, kodwa abaqhubi bayasilela, andinakufumana mntu uzondixelela ukuba ndingazikhuphela phi.Ndine Windows 10 ne XP.
UMdyarho weeMoto ezincinci, ugqatso lomdlalo wabadlali abaninzi kwi-Android